Hablayahow Hadmaad guusan Doontaan?!!! Qalinkk:Rashiid Sulub Caalin. |
Hablayahow Hadmaad guusan Doontaan?!!! Qalinkk:Rashiid Sulub Caalin.
Ugu horrayn waxaan Ilaahay ka baryeyaa, inuu salaadii iyo ducadii Roob-doonta inaga aqbalo, raxmaadkiisana inoo shubo. mar labaad waxaan Ilaahay ka baryeyaa inuu dhiigga muslimka is dilaya quluubtooda isku soo jeediyo.
Ruwaayadda magaceeda la yidhaahdo ‘Hablayahow hadmaad guursan doontaan’, waxa sameeyey Maxamuud Tukaale Ilaahay ha u naxariistee horraantii sideetamaadkii. Waxaan Ilaahay uga baryeyaa abwaankii ruwaadaasi sameeyey iyo fanaaniintii ka qeyb-qaadatay inta dhimatay inuu Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo. Angioo ka mid ahaa markii la tijaabinayey ruwaayadda dad faro ku tiris ah oo laga soo qeyb-galiyey si ay talo iyo kalmad uga yidhaahdaan habka ay u dhacaysay ruwaayaddu. Ruwaayadaasi oo xiiso gaar ah lahayd ilaa imikana ka mid ah ruwaayadaha faro ku tiriska ah ee iyadoo dhammaystiran duuban.
Waxaanan odhan karaa ruwaayadaasi meel walba way gaadhay wakhti kastana way shaqaynaysaa ujeeddada ay ka hadlaysay ee ay xambaarsanayd. Nuxurka ruwaayadaasi waxa weeyi, in habluhu ay iska dhaafaan balwadda cunista qaadka, tumashada, dhaqan-xumada iyo khiyaanada waxaanay la hadlaysay kuwa ku hawlan arrimahan inay cidhib xumo ku dambeeyaan. Sidoo kale, waxay sheegaysay in hablaha asturan ee dhaqanka suubban, isla markaana samirka iyo dhawrsanaanta ku caanbaxa ay ku dambeeyaan farxad, nolol fiican iyo sharaf.
Haddaad u fiirsato imika waxa meel walba ku badan dumarka da’ kasta ha lahaadaane markaad u eegto ragga. Taasina waxa barbar socda dhaqaalihii oo aynu isku adkaynay oo uu guurkii yaraaday iyo macsidii oo faro badatay. Dunuubtaas la galayo rag iyo dumarba waxay keeneen, in quluubteena Ilaahay ka buuxiyey baqdin, khilaaf iyo werwer, kuwaasi oo ku seetaynaya oo laba-dible kuu xidhaya markaad is tidhaahdo nolol yagleel ama aad guur hawaysato.
Runtii guurku waa xikmad Rabbaaniya, oo uu Ilaahay ugu talo galay in dadku tarmaan oo adduunkan la camiro. Fulinta arrinta guurku waa mid qof walba oo maskaxdiisu caafimaad qabto ku jirta maankiisa rag iyo dumarba. laakiin sida loogu guulaysan karo dhismaha qoys waara oo niyad-sami ku wada nool (nolol raaxo leh) ayaa ku dhiirrashadiisa iyo maarayntiisa lagu kala duwan yahay sabbankan la joogo. Haddaba aynu is dul taagno wakhtigan iyo guurka maanta, waxaynu odhan karnaa aad iyo aad ayuu u yar yahay guurku. Waxaana sabab u ah arrimo dhowr ah oo aan indhaha laga qabsan karayn waxaana ka mid ah, hawaawi ama khiyaali ay ku jiraan hablo badan iyo innamo badan oo guur doon ahi. Habluhu waxay aaminsan yihiin fikiro qaldan oo aan dhabbaha u xaadhayn inay reer yeeshaan, waxaanay badankoodu doorbidaan nin dibadda ka yimid oo baasaboor ajanabi ah haysta, oo jam-jamtaas ayey rabaan. waxaanay ka dayrinayaan innamadii waddanka joogay oo ay dhaqaale yari hayso ama gidaaradda ku qayilaya. Innamada badankooduna waxay ku jiraan badweyn waali ah, oo waxay ku mashquulsan yihiin balwad iyo fikirro ay baqdin iyo werwer hagayaan ama wuxuu doonayaa inankii gabadh dibadda ka timid ama hay’ad ka shaqaysa oo wuxuu doonayaa in arrinkiisu uu isa saar noqdo.
Dhanka kale, marka laga yimaaddo fikirradaas ay isku qufuleen iyo balwadaha hawaawiga ku dhisan ee ay dhex dabbaalanayaan ee dib u riixaya inay guursadaan, waxaynu ognahay talo walba oo adduunka jirtaba waxbaa saacida waxna way nusqaamiyaan ama way jiha habaabiyaan, qaddiyadahaas ina hor taagan ee dhibta ku haya guurka waxa ugu weyn fikradaha iyo hadalada dhinaca qaldan laga istaagayo gaar ahaan hadalkeena, waxaana ka mid ah habka bulshadeenu ay isku xaal-waraystaan, taasi oo ay Soomaalidu su’aalo qaldan wadnaha ay kugu goynayaan qacda hore ee aad is aragtaan su’aalo xasaasiya oo shaqsiyadda qofka khusaynaya, taasi oo ay Soomaalidu caado u leedahay. Tusaale ahaan hablihii guur doonka ahaa qof kasta oo ay is arkaan ama ay is xaal waraystaan wuxuu kala hor yimaaddaa, quruxdan baad leedahaye maxaad u guursan wayday? Markaa inan ka mid ah hablahaasi oo Faadumo la yidhaahdo ayaa waxay ugu jawaabtay iyadoo cudurdaar u samaynaysa guur la’aanta ‘ninkii fiicnaana naag baa haysata kuwa kalee gidaarada ku qayilayana wax laga qaato ma leh’,waxaanay ku kelifaysaa hablihii inay iskaga difaacdo cudurdaaro noocan ah. iyadoo aanay istaagin su’aalaha qaldan ilaa uu qofku ka gaboobo, oo haddana ay waydiiyaan maxaa ku ubad tiray? Waxa intaas raaca haddii ay kugu og yihiin xanuun ama shaqo la’aan waxay damqayaan boogta oo halkii aad u liidatay ayey ku waydiinayaan oo way kaa nixinayaan. Runtii hab-dhaqankan xun ee hadalka dhinaca xun laga eegayo ee ay Soomaalidu dadka u qod-qoddaan waxaad xumaantiisa ka arki kartaa markii ay asxaabtu waydiiyeen Nabiga (CSW) qofka kula joogaa haddii camalka aad samaysaba uu samaynayo oo uu ehlul-cibaado yahay sideed ku garan kartaa qalbi-wanaaggiisa? waxaanu ugu jawaabay Nabigu (CSW) ‘qofka hadalkiisa ayaad ku kala garanaysaan waxaanay arrimuhu ku xidhan yihiin kolba sida uu hadalka u dhigo oo aad ku ogaan karto inta uu kuu jiro’ ujeeddaduna waxay tahay inaan loo baahnayn wixii qofka boogta damqaya ama arrimaha uu ka fekerayo ku sii waynaynaya. Taasi oo keeni karta culays xagga maskaxda ah oo ku yimaadda, halkii ay maskaxdu qabsan lahayd wax faa’iido u leh, kadibna culayska maskaxdu wuxuu hab-dhiska jidhka galiyaa xaalad culus oo qofka fuusha. waxaanu jidhkii hawlgalinayaa difaaciisii oo dhan inta uu joojiyo hawshii kale oo dhan. Kadibna laga yaabo haddii culayskaasi sii siyaado inay qofka ku dhacaan xannuunada ay ka mid yihiin, macaanka, dhiigkarka, subagga-dhiigga iyo Kansarka. sidaa daraadeed hablaha ku jawaabaya ninkii fiicnaana naag baa haysata kuwa kalee gidaarada ku qayilayeyna wax laga qaato ma leh’, waxa loo baahan yahay in loo caqli celiyo oo hadal debacsan oo lagu toosinayo maskaxdooda loo sheego, isla markaana Ilaahay nolosheena gacanta ku hayo, oo ninka fiican aanay hablo gaar ah helin laakiin ay iyaduba nasiib u yeelan karto, oo aanay jirin xero lagu xareeyo ragga wanaagsan ee uu calafku wareegayo, waxaana laga yaabaa raggan ay yasayso ee gidaarada ku qayilaya inay ka soo baxaan rag aqoon iyo maskax fiican. Waxa kale oo ay habluhu gabeen hawl Ilaahiya ah oo Alle gallad ku siiyey inay ragga dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xunba ay jeedin karaan, siduu Ilaahay yidhi ‘Shirqoolkoodu wuu wayn yahay dumarka’ waxaanad ka arkaysaa halkaasi in Ilaahii abuuray uu qorshayaashooda uu wayneeyey. Sidaa awgeed waxa la gudboon inay gurmad u fidiyaan dhalinyarada hallowsan oo ay u soo jiidaan dhinaca nolosha fiican ku jirto, iyagoo samaynaya jawi saacidaya in inankii halowsanaa uu toosiyo naftiisa, inankaasina kuwo kale wanaag u sii fidiyo. Awoodaha Rabbaaniga ee ilaahay dumarkeena ku abuuray waxa kaloo kuu caddaynaya sheekadan, waxa jirtay naag ninkeedii ka caloolyowday oo u tagtay nin faaliye ah, waxaanay ku tidhi ‘ninkaygii ayaa iga sii jeeda beryahan dambe ee miyaad wax ii qaban kartaa si aad iigu soo jeediso ninkayga? waxaanu ku yidhi ‘ si aan arrinkaasi kuugu fuliyo waxaan doonayaa dhowr miiq oo ka mid ah shaarbaha libaaxa’. Gabadhii waxay u hawl gashay sidii ay u heli lahayd shaarbo libaax, waxay u baxday miyi, waxaanay maalin walba libaax ay siin jirtay lug hilib ah, waxay ku dhowaato maalinba maalinta ka dambaysa, maadaama uu hilib ku bartay, waxay ku guulaysatay inay madaxiisa salaaxdo, oo uu isagiina iska ogolaaday, sidaasaanay kaga soo jartay shaarbihii. Waxay u keentay ninkii faaliyaha ahaa ama dadka wax u qaban jiray. markaa wuxuu ku yidhi isagoo u caqli celinaya ‘ma gabadhaadda shaarbo libaax kasoo jartay ayaa nin maskaxdiisa isku soo jeedin kari wayday’, taasina waa inay habluhu uga faa’iidaystaan inay gurmad ugu fidiyaan innamo badan oo ka hallowsan jidka fiican.
Dhinaca kale waxa wanaagsan inaad kalsoonidaada dhisto rag iyo dumarba oo aanad arrimaha isku waynayn. Tusaale ahaan anigu waxaan af Soomaligayga ka saaray kalmadda ah ‘waa mushkilad (problem)’ waxaanan kalmaddaasi ku beddelay ‘arrintaasi waa qaddiyad xalkeeda leh oo u baahan in miisaankeeda ku habboon la siiyo’.
inanta ama inanka guur doonka ah ee wajahi kari la’ nolosha ama werwer iyo baqdin ka qaba inay guur u badheedhaan waxa habboon inay ogsoonaadaan, inay adduunkan yimaaddeen iyagoo ooyaya kana tagi doonaan iyagoo imtixaan adduunyo ku jira. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa ‘waaggii beryaba gabbal-baa soo guduuta’, subax walbana waa iyadii shalay joogtay oo waji kale leh, waxaana kula gudboon oo kaliya inaad wajahdo xalkeeda halkii aad is dhiibi lahayd. Hana isku mashquulin hadalada dhinaca xun laga istaago ee aynu kasoo hadalnay ama maahmaahaha qardajeexa ah ee wax kugu sii adkaynaya ee ay ka mid tahay ‘guurku wuu sino dhuuban yahay marka hore, marka dambana wuu sino balaadhaa’, taasi oo jawi baqdin ah abuuri karta. micnuhuna wuxuu yahay ha sino balaadho ama ha sinno dhuubnaadee waa masuuliyad loo baahan yahay in la guto waajibkeeda. Waxa kale oo aad wax ku qaadan kartaa sheekadan gaaban ee werwerka iyo baqdinta ka warramaysa: Nin maareeye ka ahaa shirkad weyn, ayaa waxa uu culays ka saarnaa shaqadiisa oo badnayd oo ilaa habeenkii uu shaqayn jiray, kadibna wuxuu u tegay nin dhakhtar ah oo ku takhasusay cilmi nafsiga. waxaanu uga warramay xaalkiisa iyo culayska maskaxda ee ka saaran xagga shaqada. Dhakhtarkii wuxuu ku yidhi ‘ ina mari gaadhigan soo raac’, markii ay dhaqaaqeen muu garanayn ninkani meel uu ku waddo, siday u socdeen ayaa wuxuu dul geeyey dhakhtarkii meel xabaalo ah oo dad dhintay ay ku aasan yihiin, waxaanu ku yidhi ‘soo deg oo halkan ku nooloow meeshan ayaan werwer lahayne, haddaad doonaysid inaad werwer la’aatid.’
Waxaan kusoo koobi lahaa, arrimuhu siday yihiin, inaan la yaraysan lana waynayn oo meel dhexe laga abaaro hawlaha ina sugaya nolosha. Waxaanan ku khatimayaa tii laygu yaqaanay ee uu abwaankii Cabdilaahi Suldaan Timacadde uu yidhi ‘nin walowba wixii kula gudboon hoos u dhugo’.
Waa Qalinkii: Rashiid Sulub Caalin Email:fatxisulub@gmail.com